Naqshadeynta Websaydhka Loo Sameeyay - Milyan sameeyayaasha
Bogagga Internetka ee Gaarka ah Waxaan la shaqeynaa dhammaan warshadaha.
Bixinta Degdega ah iyo sidoo kale waad heleysaa
Naqshad Ahaan Lagu Sameeyay Iyo Nooc Kale
Marti Shaqo Bilaash ah
Email bilaash ah (5 Ids Email oo leh 5 GB boos kasta)
Koontarool Guddi Kontarool
War maxaan ku samaynaa Baakado
U adeegayaal iyo adeegayaal daruur leh
In kabadan 1000+ Mashaariic dhameystiran oo wali la tirinayo…
Waxa aan ku sameysanno Horumarrada Websaydhada La Habeeyey
Naqshad Casriga ah
Qaabeynta Mas'uulka ah
$200.00 / Sannad
01 - 7 Bogag
Naqshadeeyayaasha Heerka 3
2 Xulashada Naqshadeynta
Soo gudbinta SE caan ah
Email bilaash ah (5 mail Ids / 5 GB space)
$400.00 / Sannad
07 - 12 Bogag
3 Xulashada Naqshadeynta
5 Dib u eegis
Soo gudbinta aasaasiga ah ee SE
$600.00 / bishii
12 - 20 Bogag
Naqshadeeyayaasha Heerka 4
5 Xulashada Naqshadeynta
10 Dib u eegis
20 Sawirada Saxiixa
$ Aan uhadalno shaqo takhasus leh
Horumarka Kumbuyuutarka Mobile
Adeeg Bixin iyo Xalka Cloud
Naqshadeynta & Horumarintav
• Falanqaynta Shuruudda: Fahmitaanka ujeeddooyinka macmiilka, dhagaystayaasha bartilmaameedka ah, codsiyada qaab-dhismeedka oo faahfaahsan oo ururi macluumaadka ugu badan ee aan kari karno.
• Jaartarka mashruuca: Jaartarka mashruuca wuxuu soo koobayaa macluumaad la soo uruuriyay laguna heshiiyay barta hore. Dukumiintiyadani waa kuwo caadi ah oo aan farsamo ahaan aad u badnayn, waxayna u adeegaan tixraac ahaan mashruuca oo dhan.
• Khariidadda Goobta: Khariidad bog oo faahfaahsan ayaa loo diyaariyey kaas oo hadhow ku hagaya tilmaamaha, adeegsadayaasha dhamaadka ee ku waayi kara qaab dhismeedka ama u baahan kara macluumaad deg deg ah.
• Qandaraasyada qeexaya doorarka, xuquuqda daabacaadda iyo qodobbada maaliyadeed. Tani waa cunsur muhiim u ah dukumintiga waana inay kujirtaa shuruudaha bixinta, dhumucyada mashruuca, aftiyada shaqa joojinta, lahaanshaha lahaanshaha iyo waqtiga. Ka taxaddar inaad naftaada ku duubto dukumintigan, laakiin noqo mid kooban oo hufan.
Heerka naqshadeynta asal ahaan waxay ku saabsan tahay horay u sii socodsiinta macluumaadka lagu sharaxay marxaladda qorshaynta si dhab ah. Waxyaabaha ugu waaweyn ee la keeni karo waa qaab dhismeedka la diiwaangeliyay iyo tan ugu muhiimsan, matalaad muuqaal ah. Marka wejiga naqshadeynta la dhammeeyo, mashruuca in ka badan ama ka yar ayaa qaab qaatay, laakiin maqnaanshaha nuxurka iyo astaamaha qaaska ah.
Jeex iyo koodh ansax ah XHTML / CSS Waa waqtigii codeynta. Jeex jeexso sawirkii ugu dambeeyay ee Photoshop, oo qor HTML iyo CSS nambarka aasaaska ah. Waxyaabaha is dhexgalka iyo jQuery ayaa goor dambe soo ifbaxaya: hadda, iskudhafka shaashadda iskugu keen shaashadda, oo iska hubi inaad saxeexdo dhammaan koodhka ka hor intaadan dhaqaaqin.
Foomamka code ee nooc kasta oo bog ah
Samee oo tijaabi astaamo gaar ah iyo is-dhexgalka: Waxaan jecel nahay inaan ka taxaddarno tan ka hor inta aan ku darin nuxurka astaamaha sababta oo ah websaydhku hadda wuxuu bixiyaa goob shaqo oo nadiif ah oo aan nadiifsanayn.
Tijaabi oo xaqiiji xiriiriyeyaasha iyo waxqabadka: Hadda waxaan dib u eegis ku sameyneynaa goobta annaga oo isticmaaleyna maamulaha faylkaaga hagitaan ahaan, dhex maro bog kasta oo la abuuray, kaas oo ay ka mid yihiin, wax kasta oo ka socda bogga guriga illaa bogga xaqiijinta gudbinta si loo hubiyo in wax walba ay u shaqeynayaan si habboon oo aan waxba kama maqal muuqaal ahaan ama wax qabad ahaan.
Ujeedada ugu weyn ee wejiga furitaanka ayaa ah sidii loogu diyaarin lahaa mashruuca daawashada dadweynaha. Tani waxay u baahan tahay udiyaarin kama dambaysta ah ee qaybaha naqshada, tijaabinta qoto dheer ee is dhexgalka iyo astaamaha iyo tan ugu muhiimsan, tixgelinta khibradaha isticmaalaha.
Dardar gelinta: Kooxdayadu waxay tilmaamaysaa qaybo ka mid ah mashruuca la horumarin karo.
U wareejinta server-ka nool: Falanqaynteena daqiiqada ugu dambeysa ee mashruuca tooska ah ayaa hadda socota.
Tijaabada: Imminka, waxaan ku hawl galeynaa baaritaanka ugu dambeeya iyadoo la adeegsanayo aaladaha la heli karo oo dhan: hubin-habe, xubin codeeye, jeegag shabakad caafimaad, Jeegaamiyeyaal iskuxiran, iwm.
Hubinta iskudayfurka iyo hubinta jawaabta: Kooxdeena waxay ku hubin doonaan mashruucan biraawsarro badan sida IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari, iPhone, BlackBerry, iwm.
Adeegyadeena IT waxaa loo fidiyaa ganacsi balaaran oo noocyo iyo noocyo ah. Waxaan u adeegnaa, iyo kuwo kale, warshadaha soo socda:
Digital & Teknolojiyada Sare
Maraakiibta iyo saadka
Alaabada Macaamiisha iyo Jumladaha oo dhan
IT iyo isgaarsiinta
Adeegyada maaliyadeed iyo bangiyada
Xidhiidhyo Faa'iido Leh oo Ku Jira Naqshadaynta Web